Waa maxay taariikhda Ivan Kupala - hambalyo. Caadooyinka, cibaadaysi, leexashada habeenkii Ivan Kupala
Kuwa kale Fasaxyada
Waa maxay tirada Ivan Kupala u dabaaldagay Slavs. Hambalyo, caadooyin, caadooyin iyo caadooyinka habeenkii ee Ivan Kupala
Ivan Kupala waa midka ugu weyn ee dhammaan fasaxyada Slavic. Illaa iyo hadda, dood badan, waa maxay Ivan Kupala - July 6 ama 7, ama, si kastaba ha ahaatee, June 24 ee qaabka hore. Jawaabta waxay noqon doontaa mid sax ah-7-da July, laakiin sidoo kale waa qalad. Waa habeenkii Ivan Kupala oo la yiraahdo magacyo. Waxaa la aaminsan yahay in waqtigan xaadirka ah laga saari karo dhammaan "indhaha sharka leh", ka saar "boobka" iyo dhammaan waxyeelada soo ururay, adigana waad samayn kartaa, samaynta fudud, iyo xittaa xiiso leh riwaayado.
Waa maxay taariikhda Ivan Kupala?
Habeenkii Ivan Kupala ee qaab cusub ayaa ka yimid 6 ilaa 7 Juulay. Si kastaba ha noqotee, dadka raacaya fasaxyada taariikhda Old Style waxay aaminsan yihiin in ay saxan tahay in la dabaaldego bisha Juun 24 - maalinta galabnimada. Fasaxa waxaa lagu dabaaldegaa wadamo badan oo yurub ah, inkastoo aan loo aqoonsanin rasmi. Masiixiyadda, waxay ku dhacdaa dhalashada Yooxanaa Baabtiisaha iyo maalinta fasaxa cibaadada ee loogu talagalay Kupalo (ama Kupala), ilaaha Slavs, oo calaamad u ah xagaaga xagaaga.
Qurxinta xiisaha, caadooyinka, caadooyinka ku saabsan Ivan Kupala
Inkastoo xaqiiqda ah in Ivan Kupala aan waligood loo dabaaldegin sida fasax rasmi ah, ku dhowaad dhammaan Slavs u dabaaldegaan. Gaar ahaan aaminsan yihiin falal, qadarin iyo caadooyinka Ivan Kupala waa gabdho yar yar, marar badan - guys. Halyeeyga ugu caansan waa inuu helo fervi uumi habeenkii laga bilaabo 6 illaa 7 Luulyo (iyo qof raadinaya Juun 24), isagoo mugdi ku iftiiminaya ubax leh ubax. Waxaa la aaminsan yahay in qofkii hela ubax fernuhu uu ogaan doono awoodda uu ku heli karo khayraad oo uu noqdo nin hodan ah. Waxaa la yaab leh in maanta ubax ka mid ah fernuhu weli sii wadaan in ay raadiyaan, inkasta oo ay muddo dheer la aasaasay: fern uusan u ubxin. Waxay yiraahdaan in xayawaanku ay xiiseynayaan habeenkii Ivan Kupala, sidaa darteed, si looga ilaaliyo naftooda iyo ciidamadooda shisheeye, marinnada iyo daaqadaha daaqadaha guryaha waxaa lagu ilaaliyaa marabax. Habeenkani habeenkii ha dhigo ubaxyada cawska oo ku jira webiga maalin ka hor. On ubaxyada ayaa ah jihada gubashada iftiinka. Gabadhii dharkeeda ku caan baxday waxay noqon doontaa midka ugu farxada badan, oo shidaalka gubanaya ee ku yaal guntiga ayaa muujinaya haddii nolosheeda ay tahay waajibkeeda. Luchina gubtay waqti dheer - noloshu waa muddo dheer. Marka loo eego caqiidooyinka caanka ah, ubaxa, cawska, xayawaanka iyo dhirta ayaa wada sheekaysta habeenkan. Dhegeysiga wadahadalkooda, waxay bartaa waxyaabo badan oo qarsoodi ah. Ubaxyada Ivan-da-Marya, oo la jeexjeexay Ivan Kupala oo lagu riday geeska guriga, ayaa ilaalin doona hoyga laga soo tuugo tuugada.
Maxaa kale oo la sameeyo habeenkii Ivan Kupala?
Calaamadaha qarsoon ee aaminsan dadka waxay xiiseynayaan inay ka qaybqaataan raadinta ubax guga, gabdhahana waxay daadin doonaan ubaxyo waxayna u daadiyaan biyaha wabiga. Yaa iyaga ka mid noqon doona farxad, yaana ka nasiib yar. Habka ugu caansan iyo ficilada ugu faraxsan ee habeenkaas waa firfircoonida Ivan Kupala. Habeenkii, dab ayaa iftiimaya qorraxda, iyo gabdhaha leh wiilasha ayaa boodaya dabka. Qoobkacaya dabka iyo boodada iyada oo loo marayo waa la nadiifiyaa ruux maskaxeed. Qof kastaa wuxuu qubaystaa habeenkan qaawan, laakiin mid waa inuu aad u taxaddaraa. Biyaha ayaa sidoo kale ku raaxeysta habeenkaas, biyuhuna waa "asxaab" dabka. Haddaad dabaasha tagto ka dib, qofkii ilaaliya amaankaaga biyaha ayaa ku sii jiraya xeebta. Dhallinyaradu waxay qabanqaabiyaan kulamada Ivan Kupala oo ku yaal agagaarka dabka iyo nadiifinta: tani waa wakhtigii guusha dhalinyarada iyo caafimaadka. Kuwa aan garanayn waxa saxda ah ee Ivan Kupala, waxay ku biiri karaan shirkadaha u dabaaldegaya fasaxa. Inta badan shirkadu waxay noqon doontaa - midka guuleysta oo xiiso leh madadaalada madadaalada, iyo sanadka.
Hambalyo ku saabsan Ivan Kupala ee aayadda
Bishii Luulyo 6-deeda, sida laga soo xigtay Style New, waa caado ah in laysu bedelo hambalyada Ivan Kupala. Waxay noqon kartaa gabayo, boostarro, heeso, sheekooyin qosol leh iyo sheeko xiiso leh oo la xiriira hiddaha iyo dhaqanka Ivan Kupala. Sii saaxiibo kaararka leh sawirada fernaha iyo hambalyo aayadda, aad jeceshahay asxaabtaada lacag, caafimaad iyo farxad. Isagoo ka doodaya tirada Ivan Kupala 6-da July, July 7 ama Juun 24, waxay si fudud u qaban karaan: u dabaaldeg maalmahaas oo dhan xafladaha farxad leh, u tag kaynta si ay u soo ururiyaan dhirta, oo u soo ururiyaan, si ammaan ah u ilaaliyaan guriga tuugada iyo jinniyadooda sharka leh.
Epiphany 2017 - Hambalyo ku leh aayadda, qandaraaska, kaadhadhka boostada iyo sms. Hambalyo gaaban oo cajiib ah oo ku saabsan Baabtiiskii Rabbiga
La kulan Sanadka Cusub ee Shiinaha 2016: taariikhda dabaaldega iyo hambalyo wanaagsan
Taariikhda asalka ah ee Maarso 8 - Xaggee bay ka dhacday Maalinta Haweenka Caalamiga ah, wax yar ka dib carruurta
Dhisidda Maalinta 2016 ee Ruushka, Ukraine, Belarus, Kazakhstan. Hambalyo rasmi ah, farxad iyo riwaayad ah oo loogu talagalay Maalinta Dhuxusha ee Aayaddan, aayadda, heesaha, sawirrada, kaadhadhka
Maalinta Hooyada ee dugsiga - Saacadaha fasalka, waxqabadyada dheeraadka ah ee manhajka, cayaaraha iyo qoob ka ciyaarka. Dhagaraysiga Maalinta Hooyada ee ardayda dugsiyada hoose iyo ardayda dugsiga sare
Maalinta Shaqaalaha Ganacsiga 2016 - Hambalyo qadarin, Aayaddan, qosol badan, rasmi ah, gaaban SMS
Duubka oo gacmihiisa ka sameysan suufka iyo warqadda, calaamad u ah Sannadka Cusub 2017. Khasnadda coke, farshaxanka iyo qalabka ciyaaraha sanadka cusub ee dugsiga iyo xanaanada: fasallada masters ee sawir leh
Da'dee ayay ka fiican tahay in ilmaha la siiyo xanaanada?
Coconut pie on caano dhanaan
Shaxanka Shaxda, waxyeelada ama dheefta
Sare kuleyl ah oo leh ham iyo jiis
Miyaan uur qaadi karaa caadada kadib?
Beerka lagu kariyo Beeraha
Miisaanka waqtiga uurka
Maalinta dhalashada ee saaxiib
Calaamadaha walaaca ee haweenka uurka leh
Sida loo qurxiyo derbiga derbiga
Qurxinta quruxda badan ee loogu talagalay carruurta loogu talagalay Easter -ka fasalada sare ee marxaladaha
Go'aaminta diyaargarowga cunuga dugsiga
Ansixinta foosha ee uurjiifka uureysiga oo dhan muddada uurka
Sida loo karkariyo Boorash cufan: cuntada ugu fiican
Isticmaalka fenugreek: cuntooyinka, sharaxaadda, hantida faa'iidada leh
Cadaadiska leh caanaha laf-dhabarka guriga
Dhirta daawada ee buckthorn
Muuqaal-xoojinta miisaanka lumitaanka